Igbo, John: Lesson 005 - Onye Baptizim na-akwadebe ụzọ nke Kraist (Jọn 1:6-13) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 005 (The Baptist prepares the way of Christ)
6 Otù nwoke putara, onye ezitere site n'ebe Chineke nọ, aha-ya bu Jọn. 7 Onye ahu biara ib͕a àmà, ka o we b͕ara Ìhè ahu àmà, ka madu nile we site n'aka-ya kwere. 8 Ya abughi Ìhè ahu, kama O zitere ya ka O we b͕ara Ìhè ahu àmà.
Chineke zitere Jọn Onye Baptizim n'ọchịchịrị ụwa iji kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa n'ìhè nke ìhè Chineke. Onye ọ bụla maara na ọtụtụ mmehie na-eme n'ime ọchịchịrị. Ma onye ọ bụla nke kwupụtara mmehie ya n'ihu Chineke, chegharịrị ma mebie obi ya, abịala n'ìhè ahụ. Kedu maka gị? Ị bịara n'ìhè ahụ ma ọ bụ na ị ka na-ezo onwe gị n'ọchịchịrị?Onye Baptist ahụ kọwaara ndị mmadụ ọnọdụ nke obi ha. Na mmekorita nke iwu nke Chineke, ha nile bu ihe ojo. Ha choro ncheghari na mgbanwe di oke mkpa ka ha ghara ila n'iyi n'ubochi nke Onyenwe anyi. Oku nke Baptizim mere ka ìgwè mmadụ gbasapụ ma ndị mmadụ gbagara onye ahụ kpọrọ ha ka ha chegharịa n'ọzara. Ha kwupụtara mmehie ha n'ihu ọha ma rịọ ka e mee ha baptizim na Jọdan, dịka ihe nnọchianya nke nhicha ha na mmehie, nhụfu nke ịchọ ọdịmma onwe ha na ọbịbịa ha site na iyi nke osimiri ahụ.
Chineke họọrọ Jọn Baptizim O mere ka ya mara ya ma nye ya iwu ime ka mmadu nile bia ka ha wee nwee uche ha, , gbanwee echiche ha ma kwadebe maka ọbịbịa nke Kraịst.Ndị Agba Ochie maara ọtụtụ ihe banyere onye ahụ na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Aịzaya onye amụma kwuru banyere ya, sị, "Ndị na-ejegharị n'ọchịchịrị ahụwo ìhè dị ukwuu: ndị bi n'ala nke onyinyo ọnwụ, ìhè na-enwupụta ha n'elu ha" (Aịsaia 9: 2). O kwukwara n'aha Onyenwe anyị, "Bilie, nwuo: n'ihi na ìhè gị abiawo: ebube Onyenwe anyị ebiliwo n'elu unu" (Aịsaịa 60: 1). Onye Baptist na-akụzi na ọbịbịa nke ọchịchịrị abanyeghị na ndị Agba Ochie, ma ọ bụ maka mmadụ nile. Ya mere, ozi nke Baptizim gbara ụwa dum gburugburu, ka ndị si Asia Minor na mpaghara ndị ọzọ dị n'akụkụ Oké Osimiri Mediterenian soro ya ruo ọtụtụ afọ mgbe ọ nwụsịrị.
Ọtụtụ puku mmadụ soro ya n'agbanyeghi na ọ na-agba akaebe na ọ bụghị ìhè, mana onye ozi ezigara ya. Ọ gwaghị ndị mmadụ n'onwe ya, kama ọ duru ha gaa na Kraịst. Nke a bụ ihe ịrịba ama doro anya nke ndị ozi nile nke Chineke, na ha adịghị agbanye ụmụazụ ha onwe ha, kama ọ bụ naanị Kraịst.Ebumnuche nke ozi Jọn abụghị nchegharị na baptism ma okwukwe na Kraịst. Ọ maara na ndị mmadụ nwere olileanya na ya ga-akpọsa na ya onwe ya bụ Kraịst.
Ma ọ dabaghị n'ọnwụnwa ma kwadebere ụzọ maka Onyenwe anyị. Ọ maara na ọbịbịa Kraịst bụ Onye ahụ ga-ndị mmadụ baptizim na Mmụọ Nsọ.. Jọn makwaara na nchegharị uche nke mmadụ na-ezughị oke, ọ bụrụgodị na e mere ya baptism maka mgbaghara mmehie. Utu ke oro, enye ama ọfiọk ke kpukpru nnyịn inyene ofụri ọfọn ke ofụri esịt nnyịn. Chineke enyeghi ya ike a iji gbanwee obi, dika o nyeghi ya nye onye obula n'ime amuma ndi ochie. Enwere ohere a maka ìhè mbụ nke na-emepụta, okwu na-enye ndụ, nke nwere ike ime ka mmadụ nwee ikike ya ma ọ bụrụ na ha ekwere n'aha ya ma meghee ya. N'ụzọ dị otú a, Jọn mere ka ìgwè mmadụ nwee okwukwe na Kraịst, na-amara na okwukwe naanị ga-ebuga ha n'ime afọ ọhụrụ.
Apọlọs bụ ọkà ihe ọmụma na-enwu ọkụ na nke siri ike na-eso ozizi Jọn Baptizim. O kwusara ozi ọma maka Kraist n'ụzọ dị irè n'enwetaghị ìhè nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ. Mana mgbe o nyefere onwe ya nye Kraist, ìhè malitere n'obi ya ma ghọọ ìhè n'ime Onyenwe anyị na mgbama n'ọchịchịrị. O mere ka otutu mmadu mata (Olu 18: 24-28).
EKPERE: Onyenwe anyị Kraist, anyị na-eto gị ma na-ekele gị maka na ị bụ ìhè nke ụwa na olileanya nke ndị ọjọọ. I mere ka ochichi nke obi anyi di omimi, kpughere nmehie ayi ma gbaghara ha. Anyị na-ekele gị maka na ị mere anyị ụmụ nke ìhè ma wepụ anyị ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị na ìhè nke ìhè gị ga-abịakwute ndị enyi anyị na ndị ikwu anyị na ha ga-enweta ezigbo nchegharị ma site n'okwukwe tinye n'ime ìhè gị.
Gịnị bụ isi ebumnuche na ọrụ Jọn Baptist?